Apple manavao ny Bluetooth an'ny iPhone 6, 6 Plus ary iPad Air 2 | Vaovao IPhone
Ny maodely iPhone sy iPad nampidirina tamin'ny taon-dasa dia mampiasa kinova Bluetooth 4.0 izay mahatonga azy hifanaraka amin'ny Handoff sy Continuity avy amin'ny OS X Yosemite ary avy eo El Capitan. Ny Version 4.0 an'ny Bluetooth dia tsy zava-baovao satria mandra-pahatongan'ny iPhone 5 dia efa nampidiriny io kinova io. Fa raha mijery ny tranokala Apple izay ahitantsika ny toetran'ny maodely rehetra ananan'ny bandy avy ao Cupertino izahay, na amin'ny iPhone izany na amin'ny iPad, dia hitantsika fa ny iPad Air 2, izay tamin'ny taon-dasa nanana Bluetooth version 4.0 izao dia nohavaozina ary mampiasa 4.2.
Amin'ny tranga iPhone 6 sy iPhone 6 Plus, natolotra tamin'ny taon-dasa, dia hitantsika ny tranga mitovy amin'izany. Raha tonga teny an-tsena izy ireo dia manana Bluetooth 4.0, dia mitondra 4.2 toa ny iPad ihany koa izy ireo ankehitriny. Tsy fantatray raha izany fiovana izanye dia niseho tamin'ny rojom-pamokarana na ny fanovana dia natao tamin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy. Azo inoana fa ny fanovana dia natao tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko satria ny isa isa dia mijanona ho iray ihany, satria ny fanovana ampahany amin'ny rojom-pamokarana hanavaozana ny kinova Bluetooth ihany no tsy misy dikany. Ho fanampin'izay, ny kinova bluetooth 1.0, 2.0 ary 3.0 teo aloha dia tsy azo havaozina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko toy ny amin'ny andiany fahefatra.
Inona no fiantraikan'ity fanavaozana ity eo amintsika? Ny kinova Bluetooth 4.2 dia 2,5 heny haingana kokoa ary manohana fahafaha-manao angon-drakitra 10 heny raha oharina amin'ny kinova teo aloha, ankoatry ny fanatsarana amin'ny lafiny toy ny fiainana manokana, fiarovana ary fahombiazan'ny angovo. Vao ny zoma lasa teo dia nanomboka niely ny tsaho vaovao momba ny mety ho fitendry vaovao, Magic Mouse ary Magic Trackpad izay mety hahatratra ny tsena tsy ho ela. Ireo fitaovana vaovao rehetra ireo dia miharihary fa hampiasa ity kinova farany an'ny Bluetooth 4.2 ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Apple manavao ny Bluetooth an'ny iPhone 6, 6 Plus ary iPad Air 2
Ny iPhone 6s vaovao dia mety hiteraka fandoroana amin'ny rantsantanana
Araraoty tsara ny iPhone 6s anao amin'ireto fampiharana sy 3D Touch ireto